BeautyPlus အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（195.6MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် BeautyPlus-Snap Retouch Filter
• Selfie ကင်မရာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသုံးစွဲသူသန်း 800 မှအသုံးပြုသောဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာအက်ပလီကေးသမ်ကို အသုံးပြု. Auto-beautification tool နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောဓာတ်ပုံကိုရယူပါ။ •ပြီးပြည့်စုံသောဓာတ်ပုံများအတွက်အစွမ်းထက်သော, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရလဒ်များနှင့်အတူတည်းဖြတ်ရေးကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်
လှပပြီးသဘာဝဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယို selfie ကိုဖန်တီးခြင်းဘယ်တော့မှမလွယ်ကူပါ။ BeautyPlus နှင့်အတူသင်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော selfies များကိုချက်ချင်းယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းထက်သောဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာဖြင့်သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုထိမိနိုင်သည်။ ဝက်ခြံ, ဝက်ခြံ, အသားအရေကိုဖယ်ရှားပါ, မျက်လုံးကိုပုံဖော်ပါ, မလိုလားအပ်သောအရာဝတ္ထုများကိုဖျက်ရန်, filter များနှင့်အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖြည့်ရန်, Blur Effect ထည့်ရန်, စတစ်ကာများကိုဖြည့်စွက်ရန်, စတစ်ကာများ, BR> Bea Bea Bea Bea Beautify) သင်၏ Selfie Photo ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ပါ။
HD Retouch: ပိုမို. သဘာဝနှင့်ပိုမိုသဘာဝကျပြီးရင်ဆိုင်နေရသည့် Selfie ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းသာပါ0င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင့်ညှိကိရိယာများ။
- ပါးလွှာသောခါး, လက်မောင်း, မျက်နှာ, ရင်သား, ရင်သားများ, တင်ပါး, တင်ပါးများကိုဆွဲယူပါ။ သင်၏အသားအရေကိုချောချောမွေ့မွေ့စေရန်နှင့်သင်၏အပေါက်များကိုချောမွေ့စေရန်ဆွဲယူပါ။ ပြီးပြည့်စုံသောအသားအရေသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။
- မျက်လုံး, နှာခေါင်း, နှုတ်ခမ်းများနှင့်အခြားအရာများနှင့်ထိတွေ့ရန်။
- ဝက်ခြံ, ဝက်ခြံ, - မျက်လုံးများ - သင်၏မျက်လုံးများကိုချဲ့ပြီးမှောင်မိုက်စက်ဝိုင်းများကိုဖယ်ရှားပါ။
BR> Remover: သင်၏ဓါတ်ပုံများမှသင်၏ပရိုဂရမ်များနှင့်ပုံရိပ်ပြုပြင်ရေးနည်းပညာများဖြင့်သင်၏ဓါတ်ပုံများမှလူများ, အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားမလိုလားအပ်သောအရာဝတ္ထုများကိုဖယ်ရှားပါ။
Enhance: Auto: Auto သည်ဓာတ်ပုံများကိုမြှင့် တင်. အသေးစိတ်ကိုအသာပုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Blur tool နှင့်သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုအတိမ်အနက်ကိုထည့်ပါ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှောက်ထားရန်ပွတ်ဆွဲပါ။
အခြားတည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ - Collage, Magic Brush, Mosaic, Vinkse, Vintage, Rotate, Rotate, Rotate, Crop Galore
စာသားများ - ဓာတ်ပုံများသို့စာသားထည့်ပါ။ ဗေဒဆိုင်ရာတင်းပလိတ်များနှင့်စတိုင်များကို အသုံးပြု. သင်၏စိတ်ကိုပြောပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရွယ်အစား, အရွယ်အစား, အရောင်, နောက်ခံ, နောက်ခံ, နေရာပြောင်းပါ။
- စတစ်ကာ - စတစ်ကာ - သင်၏ဓာတ်ပုံကိုစတစ်ကာများနှင့်လှပသောထူးခြားသောထူးခြားသောစတစ်ကာများ။ - သင်ဓာတ်ပုံဆွဲခြင်း ဓာတ်ပုံများကိုသင်၏ကြည့်ရှုသူများအားဓာတ်ပုံကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ရှင်းပြရန်ဓာတ်ပုံကိုသင်၏ကြည့်ရှုသူများထံသို့ရှင်းပြပါ။ Sunction: filter 200 ကျော်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလွယ်ကူစွာဖန်တီးရန်ကူညီရန်ကူညီခြင်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုမြှင့်တင်ရန်သင်အကြိုက်ဆုံး filter ကိုသာရွေးချယ်ပါ။
Mearup - မိတ်ကပ် - မိတ်ကပ် - မိတ်ကပ် - မိတ်ကပ် - သဘာဝနှင့်စတစ်ကာများကိုပုံမှန်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း - နှုတ်ခမ်းနီ, မျက်ခုံး, မျက်ခုံး, မျက်ခုံး, မျက်ခုံး, မျက်ခုံး, သင်၏သဘာဝအလှအပကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဆံပင်ဆိုးဆေး။
Beauty Selfie ကင်မရာ
Retouch: Retouch: သင့်ရဲ့ selfies ကိုအစစ်အမှန်အချိန်အတွက်အပြစ်အနာအဆာကင်းသောအသားအရေကိုပြည့်ဝစေခြင်းထက်ပိုပြီးစုံလင်အောင်လုပ်ပါ။ မျက်စိကျယ်ဝန်းသည့်မျက်လုံးများ, အဖြူရောင်အံသွားများ, !
- AR စတစ်ကာ: ကြောင်နားကပ်စတစ်ကာများ, ပန်းပွင့်သရဖူများ, Hilary poop-emoji hats စတစ်ကာစတစ်ကာများစတစ်ကာများကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Selfie ကင်မရာနှင့်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာအက်ပ်သည်မျက်နှာများစွာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးတည်းဖြတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ AR စတစ်ကာများကို အသုံးပြု. သင်နှင့်အတူပျော်စရာ Selfies ယူရန်သူငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ပါ။ ပျော်စရာအတွက်အကောင်းဆုံး selfie ကင်မရာ!
အကောင်းဆုံးသောဓာတ်ပုံအတွက်သီးခြား selfie ကင်မရာကို0ယ်ရန်မလိုပါ။ BeautyPlus ကိုယခုအချိန်တွင်အခမဲ့ပြုလုပ်ထားသောဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူ, ခေတ်မီသော selfie စတစ်ကာများကိုရှာဖွေရန်ယခုအချိန်တွင်အခမဲ့ရယူပါ။
သင်၏ဓါတ်ပုံများ (နှင့်တုံ့ပြန်ချက်များ) ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမျှဝေပါ။
Instagram: Instagram: https://www.instagram.com / BeautyplplplusApp /
BeautyPlus Premium Mod APK-2022 HD Retouch and All Premium Features Unlocked!! 101% Working Trick!!
ဓါတ်ပုံတွေစေ့ယူလိုမရတော့ဘူး ဘာဖြစ်တာလဲI can no longer save photos